Sababta Qariibka Ah Ee Ka Danbeysay In Eden Hazard Uu Real Madrid U Xirto Maaliyada No.50 Oo La Ogaaday - Gool24.Net
Real Madrid ayaa siisay Eden Hazard maaliyada No.50 iyadoo saxiixooda Galactico uu xusuusanayo maalintii la tagay dayaxa oo laga joogo 50 sannadood.
Eden Hazard ayaa weli si rasmi ah lambar loo siinin, waxaana xantu ay aheyd inuu qaadanayo lambarka 23aad oo uu hore u soo xirtay David Beckham markii uu joogay Los Blancos iyo in lambarkaas uu sidoo kale xiran jiray halyeeyga kubada Kolayga Michael Jordan oo uu Hazard taageero weyn u ahaa.
Madaama lambarkii uu rabay ee No.10 uu diiday Luka Modric, islamarkaana Mariano Diaz uu heystay lambarka 7aad ilaa iyo uu ka baxayo, Real Madrid ayaan dooneynin inay lambar ku qasabto xiddigeeda cusub.
Iyadoo laga joogo sannadguuradii 50aad markii dayaxa la tagay oo ay ka cagta saareen cirbixiyeenada Buzz Aldrin iyo Neil Armstrong, saxiixa cusu ee Real Madrid ayaa xalay xirtay maaliyada lambarka 50aad si uu uga qeyb qaato sannadguurada taariikhiga ah.
Kulankii xalay ee ay la ciyaareen Bayern Munich, Mendy ayaa xirtay lambarka 23aad, halka weeraryahan Luka Jovic uu xityay lambarka 18aad, saxiixa kale ee cusub Rodrygo ayaa isna xirtay lambarka 27aad.
Waxaa weli jiri doona isbedelo dhanka lambarada ah maalmaha soo socda iyadoo isku shaandheyn lagu sameyn doonaa ilaa iyo inta si rasmi ah looga dhawaaqayo, laakiin waqti xaadirkaan Hazard waa xiddiga lambarka 50aad ee Real Madrid.
Real Madrid ayaa kulankii xalay ee saaxiibtinimo waxaa looga badiyay 3-1, Corentin Tolisso, Robert Lewandowski iyo Serge Gnabry ayaa seddexda gool u dhaliyay kooxda Jarmalka halka saxiixa cusub ee Real Madrid Rydrgo uu dhaliyay goolka qura ee Los Blancos.